Lahatsary: ​​Ny fanavaozana dia tratra amin'ny famahana olana | Martech Zone
Lahatsary: ​​Ny fanavaozana dia tratra amin'ny famahana olana
Asabotsy, Aprily 16, 2011 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Ny zoma dia nomena fotoana mahavariana aho handray anjara amin'ny fihaonambe an-tampon'ny Compendium. Teo ambany fitarihan'ny filoha Frank Dale, miaraka amina hevitra avy amin'i Blake Matheny, sy ny fanohanan'ny mpanorina Chris Baggott sy ny Sales VP Scott Blezcinski, ny orinasa dia naka "fotoana" tsy hiasana ary kosa nanokana andro iray ho an'ny fanavaozana.
Nanomboka ny fandraisana andraikitra tamin'ny tantara mahavariana momba ny tsy fahombiazany tamin'ny orinasa iray i Chris, saingy rehefa namantatra ny olana izy dia nanangana orinasa mahatalanjona iray hafa - ExactTarget.
Ny lakilen'ny tantarany dia ny fanavaozana fa tsy ny famoronana zavatra sarotra na mahafinaritra… Ny famaritana olana sy ny fiezahana mafy hamantatra vahaolana. Tao anatin'ny iray andro, ekipa 3 ao anatin'ny Compendium no namantatra olana telo samy hafa nananan'ny mpanjifany:
Mora kokoa ny mamorona atiny.
Fanatsarana ny kalitaon'ny atiny.
Fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po ao amin'ny bilaogy Calls to Action.
Ireo ekipa dia nifandray tamin'ny mpanjifa manan-danja, nangataka ny fanampiany, nametraka hevitra tao anaty atidoha, ary naminavina ny vokatr'izany amin'ny orinasa aza. Tsy afaka mizara ny vahaolana aho - ny tsirairay ihany no ho mpanova lalao lehibe ho an'ny indostrian'izy ireo. Ao anatin'ny iray andro fotsiny!
Mampiroborobo ny fanavaozana toa izao ve ny orinasanao? Raha hitanao fa ny fikolokoloana ny asanao isan'andro dia mitarika ny famokarana sy ny fitondran-tena ataon'ny ekipanao - ity angamba no vahaolana mety hamelomana indray ny orinasanao, ny mpiasanao ary hamahana ny tena olana eo amin'ny tsena. Tsy isalasalana fa hampiditra an'io ao amin'ny orinasanay aho!
Fampahafantarana: tompon-trano ao amin'ny Compendium aho, manohy manampy ny mpanjifany, ary Blake dia niasa tamina tetikasa mazoto miasa mahagaga Highbridge.
Tags: blake mathenychris baggottfamintinanafihaonana an-tampon'ny fanavaozana
Fanadihadiana mora amin'ny sehatra mailaka rehetra
An-toerana ny orinasa rehetra